Libya: Ny mpikarama an’ady Afrikana (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, English
Iray amin'ny zava-manahirana indrindra ny miresaka azy nandritra ny roa herinandro nanoherana ny Kolonely Muammar Al Gaddafi any Libya izay dia ny fitateram-baovao fisiana lazain'ny mpitondra Libyana “Mpikarama an'ady Afrikana” ampiasaina hampijoro ny fitondrany efa mihozongozona.
Efa nitantara ny fisiana mpikarama an'ady avy any Serbia midaroka baomba sivily hatreny amin'ny voromby ny Global Voices. Fa ny ankamaroan'ny tsahotsaho miresaka ny momba ity mpikarama an'ady ity dia mandoko azy ireo ho “vahiny” na “Afrikana” — midika hoe avy any Afrika atsimon'i Sahara sady “Mainty”. Manako na aiza na aiza any amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena, any amin'ny haino aman-jery arabo, ary any amin'ny fitaovan-tseraseran'olo-tsotra sy amin'ny lahatsary moa ity tantara ity.
Maninona no mametraka endrika mainty amin'ity tantarana mpikarama an'ady ity nefa fantatra fa ny mponina any Libya dia sady misy mazava no misy matroka ny volo-kodiny?
Ao amin'ny taratasy misokatra ho an'ny Al Jazeera navoakany tao amin'ny bolongana Sky, Soil & Everything In Between, i KonWomyn no manahy ny fomba fanatsoran'ny mpitantara ny fanazavazavana ho “mpikarama am'ady avy any Afrika”, tsy mikaroka lalina kokoa hoe iza tokoa moa ireo olona ireo, ary iny fomba fanazavazavana iny no arahin'ny haino aman-jery manerantany.
Ny antony hafa mahatonga ity resaka ity miparitaka fatratra ihany koa dia noho ny tahotra. Ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'izay voasoratra ao amin'ny bolongana Arabist.net no anoratan'i “Benedict” momba ity mpikarama an'ady vahiny ity:
Na izany aza, ireo mpikarama an'ady any Libya tratra rehefa alaina ny taratasy momba azy dia hita fa avy any Tonizia, Nigeria ary Ginea (Conakry) sy Tchad. Tany Ghana moa dia nisy ny tsaho fa hotolorana hatramin'ny 2500 dolara amerikana izay olona ao Accra vonona hiady ho an'i Gaddafi. Ny any Ethiopia ihany koa dia nisy ny tatitra fa nisy nindramina hiady ny olona avy ao. Indro misy lahatsari-na lazaina ho mpikarama an'ady nosamborin'ny mponina tao AL Barqa, Libya.
Ho an'ny maro any Afrika atsimon'i Sahara, efa hatry ny ela i Libya no nanintona eo amin'ny sehatry ny asa ary nitoetra ihany koa ho fitodian'ny fiantsoana ho an'ireo izay mitady ny hifindra monina ho any Eoropa manavatsavana ny ranomasina Mediterranee. Hevitreverina ho 1,5 tapitrisa ny olona avy any atsimon'i Sahara no monina any Libya, miasa amin'ny sehatry ny solika sy ny orinasam-panorenana ny ankamaroany.
Miasa miaraka ara-politika sy manampy ara-bola ny governemanta atsimon'i Sahara rahateo i Gaddafi. Efa nanofana vondrona mpioko maro rahateo ny miaramila Libyana taloha, ary efa nanakarama mpikarama an'ady rehefa nisy nilana izany taloha.
Nandritra ny fotoana voalohany nanjakany ihany koa i Gaddafi izay fantatra sy notonony am-pitiavana ho ny “ Guide” no niezaka nanambatra sy nanao izay haha-Arabo ny ampaha-tany atsimo indrindra ny tanihain'i Sahara tamin'ny alalan'ny fanerena ny tanora mpifindra monina hatrany Sahel ka hatrany Pakistan hiady ho toy ny andia-tafika tokana tany amin'ny ady nitranga tany Tchad, Uganda, Palestina, Libanona ary Syria.
Ny olana hita avy hatrany dia tafihin'ny olona any Libya izay hita fa avy any Afrika atsimon'i Sahara satria raofiny ho mpikarama an'ady. Ao amin'ny bolongana mpanao tamberina Ethiopiana , maro ny mamosa-kevitra ao amin'ny lahatsoratra iray miresaka mpikarama an'ady Ethiopiana ahitana ahiahy fandrao asaritaky ny mpanao fihetsiketsehana ny mpifindra monina tsy manantsiny.
Hoy ny nosoratan'ny mpamosa-kevitra iray “Ganamo” :
Ao amin'ny bolongana pan-Afrikana i N Thompson no manoratra:
Nataon'i Tommy Miles any New York nanako izany eritreritra izany, tamin'ny nanoratany resaka niompana amin'i Afrika Andrefana, Tomathan blog:
Hoy ny mpamosa-kevitra iray amin'ity lahatsoratra ity, mitondra ny anarana hoe “Arabo”, tsy mitovy hevitra amin'izay voasoratra:
Mpikarama an'ady tanora iray avy any Tchad no milaza ao anaty resadresaka nifanaovana tamina gazety anglisy The Telegraph fa nisy olona nihaona taminy nilaza fa tian'izy ireo halefany hiasa any Libya izy. Nefa naodina ho any Al-Bayda ny voromby, tao izy sy ny niara-dia taminy no nomena fitaovam-piadiana ary nobaikoana hamono ny mpanao fihetsiketsehana.
Ny bolongan'i Ridja avy amin'ny nosy Komoro eto Afrika no nandray ity , nandray ity lohahevitra ity [Fr]:
Vincent Harris ao amin'ny bolongana Colored Opinions, bolongana misahana ny politikam-pifindra-monina Afrikana, mitantara fa manana ny fahadisoany ihany koa ny mpitondra Eoropeana:
Iray amin'ny ahiahian'ny maro indrindra, dia ny olana momba ny mpikarama an'ady ity mbola vao eo amin'ny sehatra fanombohana fotsiny. Avy amin'ny bolongana the Arabist :